किसान Archives - Page 46 of 47 - कृषि पत्रिका
पर्वत । पर्वतका किसानहरुले व्यवसायिक रुपमा घाँसखेती गर्दै आएका छन् । व्यवसायिक पशुपालनमा वृद्धि भएसँगै पर्वतमा उन्नत घाँस खेती फस्टाएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले पशुपालनमा वृद्धि गर्न तथा कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विभिन्न प्रजातीका उन्नत घाँसका वीउ सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराएको छ । हाल कृषकहरुले जै, वरसिम, भेज लगायतका प्रजातीको व्यवसायिक खेती गरेका छन् […]
बिहिबार ०६ असोज, २०७३
धनकुटा । धनकुटाका एक व्यक्तिले रू. २३ लाख को लगानीमा बगरमा माछा पालन शुरु गरेका छन् । धनकुटा बुढिमोरङ गाविस ५ का ६४ वर्षिया देव ईवाहाङ लिम्बुले भेडेटार गाविसको फलामेटारको लेउती खोलामा रहेको आफ्नो ३५ रोपनी बगर जमिनमा तटबन्धन निमार्ण गरेर माछापालन शुरु गरेका हुन् । वि.सं. २०४१ को बाढीले कटान गरेको जमिनमा अनेकौं प्रयास […]
कृषि ब्यबसाय बाट नै करोडपति
मङ्गलबार २८ भदौ, २०७३
इलाम । रसुवाको यार्सामा जन्मिएका तुलु तामाङसँग ठूलो सपना थिएन। उनले बाबुआमाले खेतबारीमा धेरै दुख गर्दा पनि परिवारको गुजारा गर्न नसकेको देखेका थिए। त्यसैले त स्कुल जान छाडेर उनी १४ वर्षकै उमेरमा विदेशी पर्यटकको झोला बोक्न गए। ‘आफ्नो बारीको आलु, मकै र कोदोले खान नपुग्ने भएपछि अक्षर चिन्न नपाई भरिया काम गरियो’ उनी विगत सम्झिन्छन्। […]
ललितपुर। माओबादी नेत्रीहरु क्रमश : दोलखा घर भएकी भगवती प्रधान र सोलुखुम्बुकी टीका बाँस्तोलाले सात लाख रुपैयाँ लगानीमा धापाखेलमा एक वर्षदेखि गोलभेँडा खेती गरेका छन् । गत चैतमा रोपेको गोलभेँडाले अहिले धमाधम उत्पादन दिन थालेको छ । उनीहरूको सोच कृषि कर्मबाट आर्थिक क्रान्ति गर्नु हो । प्रधान र बाँस्तोला अन्य पेसाभन्दा कृषि सहज भएकाले आफ्नो […]
बर्दिया। बर्दियाको सोरहवा–२, जगतपुरका माछापालक कृषक पुष्पराज भूषाललाई दिनहुँ नया रोगले धमाधम माछा मर्न थालेपछि चिन्ताले सताएको छ । ०६९ सालदेखि ५ वर्षका लागि १ करोड ८ लाखमा ७५ हेक्टर बढैयाताल ठेक्कामा लिई माछापालन गर्दै आएका भुसालले एक महिनायता करिब ३० हजार माछा मरिसकेको बताए । केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला बालाजुबाट आएका विज्ञले पानीको गुणस्तर जाँच […]
घरमै बसी–बसी किसानका समस्या समाधान
मोरङ। मोबाइल सन्देस (एसएमएस)मार्फत आफ्ना गुनासाको सामाधान हुन थालेपछि मोरङका किसान गुनासा लिएर कृषि कार्यालय धाउनुुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यलय मोरङले मोबाइलको एसएमएस प्रविधिबाट किसानका कृषिसम्बन्धी गुुनासाका जवाफ दिन थालेपछि कृषि कार्यालय धाउने झन्झटबाट मुक्त भएका हुन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका प्रमुुख राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार कृषकले कृषिसम्बन्धी भोेग्नुु […]
चन्द्रप्रसाद अधिकारी चितवनका एक नमुना प्राङगारिक कृषक
चितवन। रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बृद्धि भइरहेको बर्तमान समयमा प्राङगारिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नु एक सराहनीय काम हो । नेपालमै बसेर करिब २४ बर्षदेखि प्राङगारिक खेती प्रणाली अपनाई एक प्रगतिशील किसान बन्न सफल हुनुभएका एक कृषकको नाम हो – चन्द्रप्रसाद अधिकारी । चन्द्रप्रसाद अधिकारी चितवन जिल्लाको फुलबारी गाबिसमा बि.सं. २०१५ मा जन्मनुभएको हो । […]
कपिलवस्तु । लामो खडेरीले कपिलवस्तु कृषकहरुले लगाएको धान मर्न थालेको छ । खेतमा पानी अभावले धान खेतमा धाँजा फाटेका छन् । पानी कै अभावमा सप्रिन नसकेर धान बाली सुक्न थालेपछि किसानहरु चिन्तित छन् । गत साउन ११ यता जिल्लामा पानी परेका छैन । चर्को घामले गर्दा खेतको माटो सुकेर फुटेको छ । सिचाई सुबिधा जिल्लाको […]